DHAGEYSO Ciidamo cusub oo ah kuwa difaaca dalka oo maanta la shaqaleysiinaya
Waxaa maanta guud ahaan dalka laga bilaabay in la qoro dhalinyarada ku biiraya ciidamada difaaca dalka ee loo yaqaano KDF-ta.
Barnaamijkan oo soconayaa mudo hal bil laguna howlgelinaya in ka badan 2000 oo sarkaal ayaa wuxuu ku egyahay ilaa iyo 13-ka bisha seddexaad ee sanadkan.
Ku xigeenka madaxa ciidamada difaacada dalka Joseph Kasaon ayaa saaka daahfuray qorshaha ku aadan in dhalinyaro laga shaqaleysiiyo degaanada kala duwan ee dalka.
Waxaa uu kenyaanka uga digay inay laaluush bixiyaan isagoo carabka ku adkeeyay in cid kasta oo laaluush bixiso ama qaadato sharciga lala tiigsanaya.
Sido kale waxaa uu carabka ku adkeeyay in warqadaha shaqo ee loogu yeerayo dhalinyaradii shaqaleysiintaasi ku soo baxo laga qaadanayo oo keliya goobtii howshaasi ay ka dhacday.
Hay’ado iyo guddiyo ay ka mid yihiin waaxda qaran ee sirdoonka, ururada rayidka, guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC iyo hay’adda caalamiga ee ayaa kormeer ku sameynaya shaqaleysiinta dhalinyaradaasi .
Digniinta dowlada ayaa waxaa ka mid ah in xabsiga la dhigayo qof kasta oo doonayo inuu ku biro ciidamada difaaca oo soo bandhigo warqado, shahadooyin ama aqoonsi been abuur ah.
Paul Kindochimu oo ka mid ah sarakiisha qaabilsan howlaha shaqaleysiinta ee maanta bilowday ayaa waxyaabaha si gaar ah loo eegaya faahfaahiyay
Shuruudaha la isku shaqaleysiinaya ayaa waxaa ka mid ah in qofka ay da’diisa tahay ugu yaraan 18 sano, inuu leeyahay aqoonsiga qaran, inuu shahaadada dugsiga sare ee KCSE-da ka helay D plain, haweenka waa inaysan uur lahayn iyadoo sido kale la eegaya dheeradka iyo miisaanka qofka.
Berri oo talaado ah taarikduna ay ku beegantahay 13-ka bishan Febraayo waxaa ciidamo cusub oo ku biiraya kuwa difaaca laga qorayaa degaanka Ijara gaar ahaan Masalani ee ismaamulka Garissa., Garseeni oo ka tirsan ismaamulka Tana River ee gobolka xeebta
Arbacada oo ah 14-ka bishan waxaa dhalinyaradaasi laga qorayaa Hulugho oo ka tirsan ismaamulka Garissa, degaanka Fafi gaar ahaan Bura,
Khamiista oo ay taarikhdu ku beegantahay 15-ka Febraayo waxaa ciidamo hor leh laga shaqaleysiinaya Hola oo ka tirsan Tana River iyo degaanka Balambala ee Garissa.
Jimcada waa Likoni oo ka mid ah xaafadaha Mombasa, Garbatula oo ka tirsan Isiolo
Isniinta oo ay taarikdhu tahay 19-ka bishan labaad waxaa la qoraya dhalinyarada magaalada Garissa ee ku biiraya KDF-ta , Talaadada waa dhadhaab , Leheley oo ka tirsan koonfurta wajeer
Madogashe oo ka tirsan degaanka Lagdera ee Garissa waxaa munaasabadaasi lagu qabanayaa arbacada todobaadka dambe taarikhduna ay tahay 21-ka bishan.
Waxaa isla maalintaasi barnaamijkan uu ka dhacaya galbeedka wajeer gaar ahaan Griftu.
Khamiista oo ay taarikhdu tahay 22-ka bishan waxaa dhalinyarada laga shaqaleysiinaya magaalada Habaswein ee ismaamulka Wajeer.
23-ka bishan Febraayo oo jimco ah waxaa lagu qabanaya degaanka Eldas ee maamul goboleedka Wajeer
26-ka bishan waxaa shaqaleysiintan ay ka dhaceysaa Takaba oo ka tirsan Mandhera , degaanka Lafey, 27-ka bishan waa Elwak, Banisa halka Rhamu lagu qabanayo 1-da bisha seddexaad ee Maarso.
← Qareen lagu eedeyay inuusan u hoggaansamin shuruucda wadooyinka oo damiin lagu siidaayay
DHAGEYSO Madaxa cadaaladda ee dalka oo gaaray Kakamega →